EGO General Directorate | RayHaber | raillynews
Obodo Ankara na-aga n’ihu isetịpụ ihe atụ maka obodo ndị ọzọ na-agba mbọ ịbawanye n'ọrụ ụmụ nwanyị. EGO General Directorate, na-arụ ọrụ na ntinye aka nke Obodo Isi Obodo Mansur Yavaş, na-arụ ọrụ ụgbọ njem ọha na eze [More ...]
EGO General Directorate abawanyela ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ njem iji mee ka ọrụ ụgbọ ala dịkwuo elu site n'ọhụụ nke ịbụ ụlọ ọrụ na-eweta ndị bi na Ankara ndụ na udo na ntụkwasị obi. Ccessfulga nke ọma na udomo na ide ihe [More ...]
Onye isi obodo Ankara Metropolitan EGO General Directorate mere nhazi ndị ọhụrụ n'ime oge ndị eji ebu ndị njem njem ọha. Ka ị na-agagharị na mmemme ọrụ oyi na bọs, ụgbọ ala EGO bidoro inye ọrụ ike zuru oke na usoro niile. Obodo na [More ...]
Ndị Ankara Ntị! Na-edezi na Oge awa na Ankaray
Anaghị akwụsị akwụsị Metro na Istanbul na Ankara
N'ime usoro mgbochi oge ọ bụla, ekwuputala na a gaghị enwe ọrụ obodo na Istanbul na Ankara na 11-12 Eprel. Na Ankara, ụgbọ ala ndị EGO ga-enyere ndị ọrụ ahụike aka. Oge ejiri ọkwa nke Ministry of n'ahụ kọọpụtara okpu [More ...]
Onye isi obodo Ankara Obodo Mansur Yavaş na-enyere ndị nọ na mkpa aka site na ọrụ niile na ndị ọgbọ ha bi na Isi Obodo. Continuga n'ihu na nri na ego enyemaka n'aka ndị azụmaahịa furu efu ụmụ amaala furu ọrụ ha [More ...]
Klọ ọrụ Ankaray Enterprise Rainding Work Procurement Work EGO GENERAL DIRECTORATE RAIL SYSTEMS OFINMAT DETA Ankaray Enterprise Rail Grinding Service Procurement Service 4734th nweta 19 nke Iwu curegbapụta Ọha Nke XNUMX [More ...]
Citizensmụ amaala si Qatar kwagara na mpaghara iche na EGO Buses
N'ime oke ọgụ megide oria coronavirus (Covid-19), ụmụ amaala 7 nke Turkey, ndị si Qatar na April 2020, 360, na arịrịọ nke karalọ Ọrụ Ankara Gọọmenti Ankara, gaa na mpaghara mpaghara na-adọpụ iche na Ankara Metropolitan Municipality EGO General Directorate bus. [More ...]
Ego EGO EGO Emego Nweta Onwe Gị
Obodo Ankara na-aga n'ihu na-azụlite mmata site na ịme ihe ọhụụ iji lụsoo agha ahụ na-akpata coronavirus. AŞTİ kwụgidere n'ụgbọ njem ọha na eze, ọkachasị n'ụlọ ọrụ gọọmentị, ahịa na etiti mbuli elu, na ahịa. [More ...]
Hygiene na-anaghị akwụsị akwụsị na Ankara Metro na Ankaray Wagons
Obodo Ankara emeela ka ihe ndị ọcha dị na Metro na ANKARAY gbalitere oke ọgụ na-alụso coronavirus. Mgbe nke ahụ gasị, ụgbọ ala Metro na ANKARAY bụ oge ọ bụla nwere ngwaahịa pụrụ iche na-adịghị mma nke ASKİ mepụtara. [More ...]
Nchedo Uhie megide Coronavirus maka ndị ọkwọ ụgbọ ala EGO na Ankara
Mkpoko nke oria coronavirus nke Ankara Metropolitan Obodo na-aga n’ihu n’ike zuru oke. N'ime oke nke usoro coronavirus, amalitere ihe ọhụrụ na ụgbọ ala EGO. EGO General Directorate bu n’obi igbochi ụlọ ịnya ụgbọ ala ịbịakwute ndị njem. [More ...]
Kaadị ndị njem nke ndị ntorobịa erubeghị afọ iri abụọ gbagburu na Ankara; Obodo Ankara nke Ankara kọrọ na kaadị ndị njem na-erubeghị afọ 20 na-emechi oge nwa oge iji wee nwee ike iji ụgbọ njem ọha na eze n'ime oke nke usoro coronavirus. Korona [More ...]
Oge ozo nke Transportnye Ndị Mmụta site n’aka Onye isi oche Yavaş
Agbakwunyewo ihe ohuru na mmekorita nke umu akwukwo nke Ankara Obodo. Onye isi obodo ukwu nke obodo Mansur Yavaş, mgbe ụmụ akwụkwọ rịọrọ ya, ụmụ akwụkwọ ruru puku abụọ maka 60 TL mgbe ụgbọ njem ọha nke EGO [More ...]
Mgbanwe na Ankara Metro na Oge Ankaray
Turkey nwetara coronavirus (n'ihi Covit-19) ọrịa, mgbe a belata 90 percent were njem ọha na eze ọrụ ke General Directorate nke Ego awa March gara ọhụrụ ụkpụrụ. Na ANKARAY na Metro [More ...]
Site na ọkwa nke EGO General Directorate nke Ankara Metropolitan Municipal gosipụtara, ruo ụbọchị 1 Eprel, ha na-arụ ọrụ n'okporo ụzọ na Publicgbọala Ọha onwe Onwe (PrivateHO) na Publicgbọala Ọha na Ọha Ọha (ELV). [More ...]
N'ime oke nke usoro a na-emegide coronavirus nke Ankara Obodo ukwu, igwe na-ere ihe nhicha aka bidoro idowe na Mọnk, ANKARAY na Cable Car Stations. Ntụziaka ahụ ụmụ amaala Ankara Nnukwu Obodo Mansur Yavaş ji [More ...]